Hooyada gabadhii geeriyooday oo eedeysay booliska London. - NorSom News
Hooyada gabadhii geeriyooday oo eedeysay booliska London.
Hooyo Soomaali ah oo dhashay garab 12 jir ah oo meydkeeda laga helay wabi, i ayaa sheegtay in laamaha booliska London uu ka dhex jiro nidaam cunsuri ah, sidaas awgeedna qoyskeedu aysan waligood ogaan doonin sida ay ku dhimatay gabadhooda.
Taliska ciidamada booliska ee ka howl gala magaalada Greater Manchester ayaa horay u sheegay in dhimashada gabadhaas ay ahayd “Dhacdo musiibo ah” isla markaana iyagu aysan aaminsaneyn inuu jiray wax laga shakin karo.
Waxay saraakiishu hadda u sheegeen BBC-da inay “wali baaritaanno wadaan”.
Qiyaastii 10 saacadood ka dib, ayaa sida ay sheegtay lagu soo wargaliyay in la helay meydka gabadheeda, balse waxay booliska ku qeexday inaysan “naxariis lahayn”.
Waxay sheegtay inay ula hadleen “si adag”, ayna “isku dayayeen inay ku qanciyaan in gabadheedu ay wabiga ku dabaalaneysay”, inkastoo qoysku ay sheegeen inaysan sidaas aaminsaneyn, maadaama Shukri aysan garaneynin sida loo dabaasho.
Sidoo kale waxay sheegeen inay xirneyd dhar islaami ah oo ay ku wada xirnaa, sidaas darteedna aysan macquul ahayn “inay dabaal haweysato”.
Qareenka u doodaya qoyskan oo lagu magacaabo Attiq Malik ayaa sheegay “in saacado gudahood” geerida Shukri ka dib ay boolisku qabteen shir jaraa’id oo ay ku sheegeen inuusan jirin wax laga shakin karo.
“Qoysku waxay aad ugu adkeysanayaan in sida loola dhaqmay ay ahayd cunsurinnimo, haddii gabadhaas ay meelo kale kasoo jeedi lahaydna ay arrintu xasaasi noqon lahayd baaritaanno bandanna la sameyn lahaa”, ayuu yiri.
Previous articleUN-ka oo Norway ku eedeeyay adkeynta dib u midowga qoysaska.
Next articleOdoyaashii ka hortagay weerarkii masaajidka oo lacag xajka lagu geeyo loo uruurinayo.